हार्दिक बधाई : मधेसी महिला बाट पहिलाे पटक इन्सपेक्टरमा नाम निकाल्न सफल प्रतिभा लाई ! – Onlines Time
January 26, 2021 January 26, 2021 onlinestimeLeaveaComment on हार्दिक बधाई : मधेसी महिला बाट पहिलाे पटक इन्सपेक्टरमा नाम निकाल्न सफल प्रतिभा लाई !
सशस्त्र प्रहरीको इन्सपेक्टर प्रहरी निरीक्षक पदमा एक मधेसी महिलाले नाम निकाल्न सफल भएकी छिन् । इन्सपेक्टरमा नाम निकाल्न सफल विजयनगर गाउँपालिका ७, कपिलवस्तुकी प्रतिभा पाल एकाएक चर्चामा आएकी हुन् ।सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले प्रकाशित गरेको नतिजामा महिलारखुल्ला समूहतर्फ प्रतिभा पाल दोस्रो नम्बरमा नाम निकालेको देखिन्छ ।
विभिन्न निकायमा मधेसीमाथि भइरहेको विभेदका बाबजुद उनी इन्सपेक्टर पदमा नाम निकालेकी हुन् ।उनको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । उनलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामनाले फेसबुकको वाल रंगिएको छ यतिबेला बेला
ट्याक्सी चलाउने कृष्णबहादुरमाथि परेको विपत्ति
कृष्णबहादुर र दीपाकी एक्ली छोरी एलिशा परिवारको सम्पूर्ण खुशी हुन्। छोरीका लागि आमाबुवा पनि संघर्ष गरिरहेका छन्। कृष्णबहादुर ट्याक्सी चलाएरै भए पनि श्रीमती र छोरीलाई खुशी राख्ने प्रयासमा हुन्छन्।
तर, एकाएक उनीहरूमाथि नसोचेको तनाव आइपरेको छ अहिले। सामान्य आर्थिक हैसियतका कृष्णबहादुर र दीपाले छोरीको उपचारमा आफूसँग भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गरिसकेका छन्।
दिउँसो प्रहरी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको काम गर्ने कृष्णबहादुर रातको समयमा भाडाको ट्याक्सी चलाउँछन्। एलिशाको अवस्था दिन्दिनै जटिल बन्दै गएको छ।
कान्ति बाल अस्पताल बाहिर श्रीमान् श्रीमती निकै तनावपूर्ण अवस्थामा भेटिन्छन्। ‘तनाव हुन्छ, चिन्ता हुन्छ नि, एक मात्रै सन्तान, पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने कत्रो सोच छ, छोरीलाई रोगले सतायो, उनी अहिले अस्पतालको बेडमा पुगिन्,’ यति भनिसकेपछि कृष्णबहादुरले लामो स्वास फेरे।
२०६२ साल साउन २१ गते जन्मिएकी एलिशालाई असोजमा क्यान्सरको लक्षण देखा परेको हो। दशैंको समयमा एलिशालाई सामान्य गलफुलो देखा परेको थियो। त्यसपछि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने हुँदै गयो। एलिशाको शरीर कमजोर र छाला सेतो हुँदै गयो। र, उनी दुब्लाउँदै गइन्। कृष्णबहादुरले एलिशालाई उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल लगे।
अस्पताल लगेपछि डाक्टरहरूले रगतमा इन्फेक्सन भएको हुन सक्ने आशंका गरेर रगत जाँच गर्न लगाए। एलिशाको रिर्पोट लिन कृष्णबहादुर एक हप्तापछि अस्पताल गए। एलिशाको घाँटीको घाउँ निको भएन। झन पाक्दै गएको थियो। त्यसैले एलिशाको रगत परीक्षणका लागि भारत पठाउन डाक्टरले सुझाव दिए।
२८ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च गरेर भारतमा रगतको स्याम्पल पठाइयो। एलिशाको रगतको रिपोर्ट ११ दिनमा आयो। र, पछि एलिशालाई ब्लड क्यान्सर भएको थाहा भयो।
एलिशालाई ए लेबलको ब्लड क्यासर भएको रहेछ। यो खबरले उनका अभिभावकलाई असह्य पीडा दियो। एलिशाको उमेर कम भएकाले समयमै उपचार पाएमा निको हुने डाक्टरको भनाईले उनीहरूलाई केही सान्त्वना मिल्यो। यसअघि पनि कान्ति बाल अस्पतालबाट केही बालबालिकाहरू क्यान्सर निको भएर घर फर्किएको केश पनि रहेको डाक्टरले बताएका कृष्णबहादुरले जानकारी दिए।
एलिशाको उपचार खर्च १० लाख रुपैयाँ पुग्ने कृष्णबहादुरले बताएका छन्। अहिलेसम्म ३ लाख ५० रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जसमा सरकारका तर्फबाट प्राप्त १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि पनि सामेल छ। ‘मामासँग एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएर छोरीको उपचारमा खर्च गरेको छु, अरु पैसा जुटाउने कोसिसमा छु,’ कृष्णबहादुरले भने।
एलिशालाई कृष्णबहादुरले भक्तपुरस्थित साँगा बोर्डिङ स्कुलमा होस्टल राखेर पढाउँदै आएका छन्। उनी कक्षा ९ मा अध्ययन गर्छिन्। कृष्णबहादुर र दीपा वसन्तपुरमा भाडामा बस्छन्। कृष्णबहादुर न्यूरोड, विशालबजारस्थित प्रहरी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गर्छन्। उनले त्यहाँबाट एक लाख २० हजार रुपैयाँ सहयोग प्राप्त गरेका छन्।
प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत कृष्णबहादुरलाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रहरी कार्यालयहरूबाट पनि आर्थिक सहयोग उठाएर दिने बताइएको छ। एलिशाको एक पटक किमो गरिएको छ। अढाई महिनामा उनलाई सेतो रगत ७ पाउण्ड र रातो रगत ९ पाउण्ड चढाइसकिएको छ।
कान्ति बाल अस्पतालको आइसियूको बेड नम्बार ३०५ मा एशिला उपचाररत छिन्।
उनको उपचारका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर १०९०१००००००४२१०४ मा पैसा जम्मा गरेर सहयोग गर्न सकिन्छ। कृष्णबहादुर थापा मगरको फोन नम्बर ९८४३११८००१ हो।
भा’इरल नविना केसीको अर्को ध’मका ! सारंगी बजाउने भाईलाई पछारिन, पर्यो घम्साघ’म्सी दोहोरी Nabina Kc
इतिहास रचेका नेपालीलाई भब्य स्वागत,K2 Climbers Nepali arrived Ktm,भारतबाट पनि आयो नेपाललाई बधाई
सबैले माया मारेकी अनिता खड्का बिस्तारै हिड्न र बस्न सक्ने भइन ,यस्तो छ पछिल्लो अबस्था Binod & Anita (भिडियो हेरि सेयर गराै)
April 12, 2021 onlinestime
प्रे’म-पत्रको जवाफ नदिँदा कविताको ह’त्या, १६ वर्षका कृष्ण प’क्राउ
March 17, 2021 onlinestime
धुवा र खरानी बनेर अस्ताए कन्चन तिमिल्सिना गाउँले सबैका आँखा थामिएनन् आमाको अवस्था भयो एस्तो (भिडियो)